China Eco-friendly izithambiso Bag Umququzeleli uziphu yakutya kunye inwebu Puller mveliso kunye nabathengisi | Utshintsho
Ukutyala iFiber Bag
Umqhaphu kunye neLinen Bag
Ingxowa yePhepha enokubakho
Isikhwama se-EVA esenziwe ngokutsha
Ingxowa ye-TPU ehlaziyiweyo
DB Material Pocket Sport St ...
Eco-friendly ecwebezelayo DB quil ...
Eco-friendly DB izithambiso ba ...
Eco-friendly ezinokuboliswa ziintsholongwane ...
Ingxowa yeSizwe yeCotton Canvas ...
I-Eco-friendly cosmetic Bag Isilungisi seZiphu kunye neTassel Puller
Imilo ayikho nkulu kangangokuba kulula ukuyiphatha nokuyigcina, ngaphandle kwayo, intle kwaye ikhethekile kwi-unisex ukuyisebenzisa. Ingxowa yonke yendalo kwaye ihlangabezana neemfuno "zokusingqongileyo". Le bhegi luhlobo lwe-T oluzinzileyo.
Izinto: Iphepha leendiza Ubunzima: 53g
I-L25 * W8 * H15cm
Indawo yokuQala: I-GUA, CN Izibuko: Shenzhen, GZ, HK
MOQ: 5000 Ngentando: Yamkelwe
Isicelo: Umququzeleli wezithambiso, izindlu zangasese, ishishini lokuhamba
Uncedo: yendalo, ehlaziyekayo
Imigca yezinto ithe tye kwaye icocekile, unokuziva ukuba umgangatho wezinto esizikhethileyo uphezulu kwaye uyaqinisekisa. Izinto ezinobuhlobo zisetyenziswe kuluhlu olubanzi.
Imilo ayikho nkulu kangangokuba kulula ukuyiphatha nokuyigcina, ngaphandle kwayo, intle kwaye ikhethekile kwi-unisex ukuyisebenzisa.
Ingxowa yonke yendalo kwaye ihlangabezana neemfuno "zobume bendalo." Le bhegi luhlobo lwe-T oluzinzileyo.
Inquma lithambile kwaye liyanda kancinci kwaye liyasebenza.
Ukuhamba, kwanele ngokwaneleyo ukupakisha izinto zokuthambisa okanye izinto zangasese.
Egqithileyo Iphepha leNdiza yengxowa ye-Eco-enobubele yeNdalo yeNdalo Yenza isiCwangcisi seCosmetic
Okulandelayo: Iphepha leNdalo elenzelwe i-Eraw-friendly yeCosmetic Organiser Zipper yakutya Yenza ibhegi
I-Customize Service e-Changlin izimisele ukuvelisa iingxowa ezizodwa, ezikumgangatho ophezulu ukuqinisekisa ishishini lakho ngcono ngalo lonke ixesha.
Iqela lethu lisebenza ngokusondeleyo kunye nawe ukwenza izisombululo ezingcono, sisebenzisa izinto ezinokuphinda zisebenze kwaye zihlaziyeke ngeendlela ezilungileyo. Singadala nabuphi na ubungakanani kunye nokumila kweengxowa zokuthambisa, ezivela kuhlobo olwahlukileyo lwezinto ezizinzileyo, ushicilelo oluzinzileyo, uyilo olunobuchule, ngokweenkcukacha zakho.
Ngomonakalo wokusingqongileyo uyanda njengoko ishishini likhula, kunye nembono yophuhliso oluzinzileyo, ngoku ngakumbi nangakumbi izinto ezinobungozi kokusingqongileyo zisetyenziswe kuluhlu olubanzi apha: Umqhaphu wendalo okanye wendalo kunye nelineni ziqhelekile kuyo yonke indawo, iRPET Material ikwi Ngelixa i-EVA e-Recycled okanye i-TPU eRisayikilishwe iya kuba yindlela entsha Izinto ezintsha zefayibha zezityalo ezifana nelinanapple nelaphu lebhanana ziyaphuhliswa kwaye ziyasetyenziswa. U-Changlin uzibophelele ekunikezeleni abathengi bethu iimveliso ezintsha kunye nezinto ezintsha, ukuphuhlisa iimveliso zokhuselo lokusingqongileyo, kunye negalelo lamandla ethu kukhuseleko lokusingqongileyo komhlaba.
Natural Iphepha Ngeendiza Bag Eco-friendly izithambiso O ...
Iphepha Ngeendla ingxowa Eco-friendly Natural Umbala Ma ...
Umqhaphu kunye neLinen
NO167 indlela yesibini yeGaoxin, iSithili saseGaoxin, Heyuan, China